musha > Travel Europe > Easter Mhemberero In Europe Zvausingakwanisi Kupotsa
Easter Mhemberero mu Europe zvinosiyana nyika kuti nyika uye kubva mumaguta. Ndicho chimwe chezvinhu zvinokosha uye mukuru mitambo wepa Church Christian. Isita ndiye kupemberera kumuka kwaJesu Kristu kubva paguva.
Kupemberera musi Easter anochinja ose gore. Zvinonzi yemanyorero musi wokutanga weSvondo pashure rejenaguru vachitevera muchirimo rinenge riine. It kunoitika panguva dzakasiyana nerimwe gore, kubvira mukupera Kurume pakunopera Kubvumbi.
In chiKristu, Week Mutsvene ndiye vhiki pamberi Easter uye inosanganisira Sunday Palm, Maundy China, Good Friday uye Holy Mugovera. In Europe, Nyika dzakawanda Isita kuburikidza abatidza moto makuru kuti dzimwe nguva anonzi moto Judhasi. pakutanga, omoto izvi zvaireva kupemberera nokusvika kwematsutso. Heino kungotarisa sei dzimwe nyika yenyu kufarira European Isita.
Kutanga Easter mu The Netherlands
mu Holland, kugadzirira Easter vanotanga zuva pamberi muLent. zuva rino anonzi "Vastenavond" kana Fast Eve. Panguva ino, The Netherlands achinakidzwa rinonyatsooneka sefungu vashanyi wokumwe vanoda kudya mhemberero dzavo.
Vanhu vanopinda chechi kuti Easter mabasa ayo zvinowanzokonzera ane yomutambo kudya. Kids rambai zai yakadaro pakutsvaka zvakajeka yakashongedzwa vakabika mazai kana chokoreti mazai. muridzi Tikken chinhu chaanofarira Easter mutambo sezvamakaropafadzwa vanhu gogodza mazai pamwe. The chinangwa chomutambo ndiko kutsemuka mumwe munhu zai pasina nokuputsa zvako.
Antwerp kuna Amsterdam Zvitima
Antwerp kuna Breda Zvitima
Easter Mhemberero muFrance
The French Isita kupinda chaiyo basa chechi, vaitamba mutambo kudya, uye Easter zai kuvhima. Uchaona zvitoro uye Mabheka chocolate tsuro, mabhero, nezviratidzo remvura.
The French vanodawo mazai chokoreti, kuvashandisa chaizvo vana Easter zai yakadaro. The French zvakare vane makwikwi zai-rinopfungaira kunosanganisira tikaisa mazai mbishi pamateru. Kunewo chevana mutambo kuti kunosanganisira vachimwaya mazai itsva mudenga. Wokutanga kuputsa zai akatsunga ndichirasikirwa acharerekera vamwe zvihwitsi yavo mumwe mwana.
tsika An dzinonakidza Easter mu Furanzi ndiyo cloches volantes kana "ichibhururuka mabhero." Hapana chechi mabhero mhete pakati Chishanu uye Easter Sunday mangwanani. Zviri chete pashure kereke Easter Sunday basa kuti zvitare rin'i, vachipemberera kumuka kwaJesu. France chiri inozivikanwa kurovererwa kuenzanisira.
Easter Mhemberero kuItaly
Easter mu Itari kunotaurwa kubudikidza vokuItaly sezvo La Pasqua. Kusiyana nevamwe nyika dzokuEurope, hamungambovi kuona Easter kani kana Easter zai yakadaro muItaly. Kupemberera ichi inofadza ndizvo zvose pamusoro tsika dzinodiwa.
mudungwe Religious inoitwa maguta Italian uye maguta neChishanu uye Saturday pamberi Easter. On Easter Sunday, kutarisira chikafu kuita basa rinokosha mune mhemberero. Iyi itsika yemitambo iyi inosanganisira artichokies uye Angelino kana gwayana rakacheka mucheche uye kune akanakisa Goat iri zvakare pane menue. Uye vanhu kupa njiva serin'i kana korona serin'i chingwa sezvipo.
In Roma, kusvinurira kuri kuitika paSt. Petro Basilica musi Holy Saturday. It inotanga pa 9 pm uye anoenderera mberi kusvikira pakati pousiku sezvo kunoita pakutanga mangwanani Easter. On Easter Sunday, zvikuru akamirirwa gobvu kunotanga Pope adzikinure ropafadzo pavharanda.
Nokuda Papa uye Vatican, Roma ndiyo nzvimbo kuti Easter mitambo mu Europe. Vanhu vanobva pasi pose kuitawo mhemberero uye vanopinda Vatican Palm Sunday vakawanda. Nokuti vakasununguka, rinogona kuwana runako ungana.
Kana uri kuronga kupinda Easter guru muRoma, zvakanaka zvikuru bhuku matikiti zvenyu mangwanani. Book zvigaro zvenyu pachine kunakidzwa zvakanakisisa prices. Nokuda kukurumbira pakati mitambo Isita mumaguta akaita Rome, Paris, uye Amsterdam, nguva dzose kuchenjera kuronga.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feaster-festivities-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Festivities easter europetravel longtrainjourneys mazano trainjourney Tranride traintip Train Travel travelfrance travelnetherlands
pamusoro 3 European Railways Kushumira Food Good
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe